I-Luxury Condo Horizon 3, Ocean View/Ichibi elincane /Wifi
I-Condo ihlome ngokuphelele, okuhlanganisa i-infinity pool, ichibi lokubhukuda elincane, i-WIFI engenamkhawulo, i-A/C, ukufinyelela okuvikelekile ngesango elizenzakalelayo nokunye okwengeziwe, ukuze wenze isiqiniseko sokuthi ukuhlala kwakho kuzoba ntofontofo futhi kukhumbuleke ngangokunokwenzeka!
I-condo futhi inechibi lokubhukuda elincane eliyimfihlo kuvulandi , futhi endaweni yesigodi kukhona ichibi elingapheli kanye namadekhi amasha angu-2 anokubuka okumangalisayo kolwandle ukuze uphumule noma wenze ngisho nomdlalo othile ofana ne-TRX ne-yoga phakathi nemvelo.
Futhi, uChris unesikhungo sakhe se-PADI dive. Zitholele i-scuba diving, ukwakheka, uhambo lolwandle, nokunye okuningi kuyatholakala, kanye nohambo lwe-snorkeling nge-Sunset. Ngesikebhe esisha esine-inflatable.